Daawo:- Gudoomiyaha Baarlamaanka maamulka Hir-shabeele iyo Madaxwaynihii la Eryay oo Hadlay - Hablaha Media Network
Daawo:- Gudoomiyaha Baarlamaanka maamulka Hir-shabeele iyo Madaxwaynihii la Eryay oo Hadlay
HMN:- Waxaa goor dhowayd magaalada Jowhar Warbaahinta kula hadlay Cali Cabdullaahi Cosoble Madaxweynihii Maamulka Hir-Shabeelle ee xilka laga qaaday, waxa uuna sheegay in xilka qaadistii ay ku sameeyen xildhibaanada ay tahay mid aan waxba ka jirin.
Sidoo kale waxa uu sheegay in isagu uu yahay Madaxweynaha Hir-Shabeelle islamarkaana wixii tabasho ah ay jira la xalin doono.
Dhinaca kale Sheekh Cusman Bare Maxamed Gudoomiyaha Baarlamaanka maamulka Hir-Shabeelle ayaa ka hadlay mowqifkiisa xilka qaadistii madaxweyne Cosoble.
Gudoomiyaha oo ay horfadhiyeen xildhibaano gaaraya ilaa 81 xildhibaan ayaa sheegay in markii la eego Dastuurka Maamulka Hir-Shabeelle uu cadeynayo tirada ama Kooraamka ay Madaxweynaha Xilka uga qaadi karaan xildhibaanada.
HALKAN KA DHEGAYSO GUDOOMIYAHA BAARLAMAANKA
Waxa uu sheegay in xilka qaadistaas iyo go’aankii shalay ay qaateen xildhibaanada uu yahay mid Sharci ah,maadaama kulamadii Baarlamaanka ay Goobjoog ka ahaayeen ku xigeenadiisa, Waxa uu sheegay in Dastuurka Hir-Shabeelle Qodobkiisa 52,aad uu qorayo qaabka uu Madaxweynaha ku weyn karo xilkiisa.
Ugu dambeyn waxa uu sheegay in Cali Cabdullaahi Cosoble uu ka mid yahay Shacabka Hir-Shabeelle islamarkaana mudo 30 Cisho uu xilkaas Si KMG, ah uu u heynayo ku xigeenkisii Cali Cabduulaahi Xuseen Guudlaawe.